किन कोमल वली बनिनन् एमालेको सबै भन्दा प्यारो ? खास यस्तो रहेछ कारण: – ejhajhalko.com
किन कोमल वली बनिनन् एमालेको सबै भन्दा प्यारो ? खास यस्तो रहेछ कारण:
१० माघ २०७४, बुधबार १४:४३ 338 पटक हेरिएको
काठमाडौं । एमाले कार्यकर्तामाझ निकै लोकप्रिय हुँदाहुँदै युवा नेता ठाकुर गैरे चौथो पटक पनि सांसद बन्ने अवसरबाट बञ्चित पारिएका छन् । २०६४ को चुनावमै सभासदको उम्मेदवारका दावेदार गैरे त्यतिबेला पाखा पारिए । ६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा त उनले टिकट पाएनन् नै समानुपातिकबाट समेत सांसद बन्ने अवसरबाट बञ्चित गराइए । ६ वर्षपछि २०७० सालमा दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यसपटक भने गैरेले टिकट पाउने आशा गरिएको थियो । तर, दोस्रोपटक पनि गैरे कतैबाट एमालेका सांसदको सूचीमा अटाउन सकेनन् ।
अहिले २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा गैरेका लागि अर्को अवसर थियो । त्यतिबेला पनि उनी पाखा पारिए । तेस्रो पटक पनि पाखा पारिएका गैरे चौथो पटकमा त राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बन्छन् कि भन्ने कार्यकर्तामा आशा थियो । तर, यसपटक पनि एमाले नेतृत्वको आँखामा उनी परेनन् ।
पार्टीभित्र माथिल्लो स्थानसम्म पुगिसकेका उनी पटक पटक पाखा पारिन्छन् तर गैरेले गुनासो गर्दैनन् । पार्टीले जतिपटक सौतेलो व्यवहार गरे पनि उनी सहजै पार्टीको निर्णयलाई स्वीकार्छन् र भन्छन् ‘पार्टीले गरेको निर्णय मलाई स्वीकार्य छ । यस विषयमा केही भन्नू छैन ।’ गैरेले यसपटक राष्ट्रियसभाको उम्मेदवारी नपाएपछि पनि त्यही सदाबहार प्रतिक्रिया दिए ।
पार्टीले जतिपटक सौतेलो व्यवहार गरे पनि उनी सहजै पार्टीको निर्णयलाई स्वीकार्छन् र भन्छन् ‘पार्टीले गरेको निर्णय मलाई स्वीकार्य छ । यस विषयमा केही भन्नू छैन ।’
ठाकुर गैरेजस्ता सिनियर र निष्ठावान नेता पाखा पारिँदै गर्दा त्यही एमालेभित्र कोमल वलीजस्ता भर्खर पार्टीमा छिरेकाले भने उम्मेदवार बन्न पाएका छन् । एमालेले राष्ट्रियसभाको लागि प्रदेश ५ बाट महिलातर्फ वलीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । कोमल केही महिना अघिमात्र एमाले प्रवेश गरेकी हुन् । एक वर्ष अघिसम्म राजनीति क्षेत्रमा नामै नसुनिएकी वली एक वर्षअघि राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा पार्टी प्रवेश गरेकी थिइन् । राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएपछि चर्चामा आएकी वली राप्रपामा एक वर्ष पनि टिक्न सकिनन् ।
प्रतिनिधिसभामा राप्रपाबाट टिकट पाउने छाँटकाँट नदेखेपछि वलीले राप्रपा नै त्यागिन् । लगत्तै उनी एमाले प्रवेश गरिन् । त्यतिबेला एमालेले उनलाई सांसद बनाउने भनेर पार्टी भित्र्याएको चर्चाले राजनीतिक वृत्त निकै तातेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभामा एमालेले वलीलाई उम्मेदवार बनाएन । लगत्तै वलीले आफ्नो आफ्नो चरित्र देखाइछाडिन् । टिकट नपाएको झोंकमा एमाले–माओवादीको बाम गठबन्धनविरुद्ध नै बागी उम्मेदवारी दर्ता गरिन् । पछि एमालेले केही फकाएपछि उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिइन् । त्यतिबेला एमालेले उनलाई कसरी फकायो भन्ने प्रस्ट थिएन । अहिले आएर कुरा प्रस्ट भएको छ – एमालेले उनलाई राष्ट्रियसभामा सांसद बनाउने भन्दै फकाएको रहेछ ।
‘सती’ जाने ठाकुर, ‘पोइल’ जाने कोमल
कोमल वलीले केही वर्षअघि एउटा तीजगीत गाएकी थिइन् ‘पोइल जान पाम्’ । अविवाहित वलीको त्यो गीत त्यतिबेला निकै लोकप्रिय पनि भएको थियो । अविवाहित भएकैले उनलाई ‘कहिले पोइल जाने’ भनेर सोध्नेहरु पनि धेरै थिए । गीतमा जे भनेपनि उनी कुनै वरसँग भने अहिलेसम्म पोइल गएकी छैनन् तर राजनीतिमा भने पटक–पटक पोइल जाने चरित्र देखाइसकेकी छिन् । उनको राजनैतिक करिअरले प्रस्ट पारेको छ –उनी आफूले भनेजस्तो पाइनन् भने पोइल हिँडिहाल्छिन् ।
उनको राजनैतिक करिअरले प्रस्ट पारेको छ –उनी आफूले भनेजस्तो पाइनन् भने पोइल हिँडिहाल्छिन् ।
राप्रपाबाट केही फाइदा हुने लोभमा राप्रपा छिरेकी उनले त्यहाँबाट पहिलोपटकमै सांसदको टिकट पाइनन् । रिसमा उनले पार्टी प्रवेश गरेको एक वर्ष पनि नपुग्दै पार्टी नै लत्याएर हिँडिन् । यही बीचमा उनले एमालेबाट केही आश्वासन पाइन । लोभी मन न हो उनी एमालेतिर कुदिहालिन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखमा सांसद बनाउने भन्दै एमालेले उनलाई भित्र्याएको चर्चा चल्यो । तर, उनले टिकट पाइनन् । आफूले भनेजस्तो नभएपछि पोइल हिँडिहाल्ने चरित्र उनले त्यतिबेला बागी उम्मेदवारी दिएर प्रस्ट पारिन् । अहिले राष्ट्रियसभामा टिकट पाएपछि मात्रै उनी एमाले टिकेकी छिन् । उनका अहिलेसम्मका क्रियाकलाप हेर्दा अर्कोपटक भनेजस्तो पाइनन् भने फेरि पोइल नहिँड्लिन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।
अर्कोतर्फ ठाकुर गैरे छन् जसले एमालेको लागि निष्ठाको राजनीतिक गरेका छन् । विद्यार्थी जीवनमै एमाले अखिलबाट राजनीति थालेका गैरेले अहिलेसम्म एमालेलाई नै आफ्नो सर्वस्व ठान्दै आएका छन् । उनी एमालेको विद्यार्थी संगठन अखिलको केन्द्रीय अध्यक्ष भए । पछिल्लो महाधिवेशनमा कुनै प्यानलमा नपर्दा पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत भए । उनी बलियो दावेदार हुँदाहुँदै पनि ४ पटकसम्म सांसद बन्ने अवसरबाट बञ्चित पारिए । यति हुँदाहुँदै पनि उनले ‘उफ्’सम्म गरेका छैनन् । भन्छन् ‘पार्टीको निर्णय शीरोधार्य छ ।’
ठाकुर एमालेको लागि सती जान तयार छन् तर कोमल भनेजस्तो नभए पोइल हिँड्छिन् ।
ठाकुर एमालेको लागि सती जान तयार छन् तर कोमल भनेजस्तो नभए पोइल हिँड्छिन् । यस्तो अवस्थामा एमाले नेतृत्वले उम्मेदवारी छनोटमा जुन विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेको देखिएन । भनेजस्तो नपाए पोइल हिँड्ने श्रीमतीले घर धान्छिन् वा परिवारमा जस्तोसुकै समस्या परेपनि त्यही घरलाई आफ्नो ठानेर समस्यासँग जुध्ने श्रीमतीले घर धान्छिन् ? एमाले नेतृत्वले बुझ्न सकेको देखिएन । यसरी निष्ठावान नेतालाई पाखा पार्दै जाँदा भोलि एमालेको भविष्य नै संकटमा पर्न सक्छ ।
एमालेले ५ नम्बर प्रदेशमा खुलातर्फ एक जना उम्मेदवार मात्रै पाएको र त्यसमा खिमलाल भट्टराई र ठाकुर गैरेमध्ये एकलाई छान्नुपर्ने भएकोले खिमलाललाई छानिएको केन्द्रीय नेताहरुले बताएका छन् । तर, जिल्ला तहका नेताले भने ठाकुरको नाम प्रदेशले नै केन्द्रमा सिफरिस नगरेको बताएका छन् । जिल्लाका एक नेताले प्रदेशले राष्ट्रिय सभाका लागि सय जनाजतिको नाम केन्द्रमा सिफारिस गर्दा ठाकुरको नाम नअटाएको भन्दै दुई दिनअघि आक्रोश पोखेका थिए । प्रदेशबाट सय जनाको सूची बनाउँदा पनि ठाकुरको नाम नपर्नु निकै अस्वभाविक मानिएको छ ।